biyo ganache recipe (fudud) + tutorial - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Recipe Water Ganache
Ganache biyaha waa uun biyo iyo shukulaato dhalaalay waxayna ka dhigtaa dhibcaha ugu fiican!
Ganache biyo waa ganache lagu sameeyo biyo halkii kareem. Dhadhanku weli waa uu fiican yahay laakiin caano laguma daro. Waxaad u sameysan kartaa ganache biyo sababo dhawr ah awgood. Waxaa laga yaabaa in kareemkii kaa dhamaaday, laga yaabee inaad sharciyo aqal aqal ah oo deegaankaaga ah kaa hortaagan inaad isticmaasho caano cusub. Waxaa laga yaabaa inaad raadineyso inaad sameyso nooc vegan ah oo ganache ah. Wax kastoo sababahaagu yihiin, ganache biyaha waxay u dhaqmaan isla sidii caadiga ahayd ganache shukulaato cad wayna ku fiican tahay samaynta kuwa keega quruxda badan.
sida loo sameeyo buuxinta keega buluugga ah ee guriga lagu sameeyo
Waqti fog ka hor, aniga oo wali ah Shirkadda Cake ee 'Artisan Cake', waxaan ku xardhay qoraal ku saabsan qaab-soo-jeedin toos ah oo toos ah oo loo yaqaan ganac ganac biyo qalbiga dahab keega dhibic . Inta badan waxaan u sameeyay kaliya inaan muujiyo in ganache lagu samayn karo nooc kasta oo dareere ah, maahan biyo kaliya.
In kasta oo dadku indhahooda ku arkeen inaad biyo ka sameysan kartid biyo, haddana weli waxaan heli lahaa su'aashaas, 'biyo ma qabanayaan shukulaatada?'
Marka waxaan go aansaday inaan sameeyo fiidiyoow muujinaya sida kareemku dhab ahaan ugu dhaqmo sida biyaha taas oo u badan biyo leh qadar aad uyar oo dufan ah. Haddii aad ku dari lahayd wax yar oo kareem ah qaar ka mid ah shukulaatada dhalaalay way qabsan lahayd sida haddii aad biyo yar ugu dartay shukulaatada dhalaalay. Sida aad uga dhigayso 'ganache' waa adoo ku daraya biyo badan si dareeraha ugu jira saamiga shukulaatada uu sax yahay.
Sida loo sameeyo keegaaga faleebada ah dahab
Waxaad ku rinjiyeyn kartaa ganache leh boodhka dhalaalaya macdanta lagu qaso walxaha aan caadiga ahayn ama liinta ama waxaad ku midabeyn kartaa ganache-kaaga midab nacnac leh oo loo sameeyay gaar ahaan loogu daro midabka shukulaatada. Waxaan jecelahay inaan ku daro xoogaa jaalle, oranji iyo taabasho madow ah shukulaatada si aan u sameeyo midab bunni ah oo wasakh ah oo u eg codadka dahabka sidaa darteed haddii aan waayo meel intaan wax sawirayo, runtii ma sheegi kartid Hubso inaad faleebadaada u dejiso qaboojiyaha ilaa ay adag tahay ka hor rinjiga.
Waxaan jecelahay inaan isticmaalo waligaa maxaa yeelay waa aalkolo cadeyn sare leh oo si dhaqso leh uumi baxeysa, kana tagaysa dhalaal aad u sareeya. Hubso markaad khamrigaaga ku daraysid boodhka macdanta, waxaad kaliya ku daraysaa dareere ku filan oo aad ku samayn karto isku mid qaro weyn oo u eg sida rinjiga. Haddii aad ku darto dareere badan mahelaysid caymis wanaagsan. Sidoo kale hubi nooca boodhka aad isticmaaleyso inuu yahay iftiin sare. Waan jeclahay dahabka super-ka ah balaastig runti waalan oo aan aheyn toxi oo leh iftiinka ugu fiican aragtidayda.
Haddii aad raadineyso metallik si buuxda loo cuni karo kafiiri dahabka birta qaanso roobaadka ama farshaxanka la cuni karo ee farshaxanka farshaxanka leh ee metallics.
Digaag rootiga qalalan oo casaan ah
Waxaan dhawaan tijaabiyay sameynta buttercream strawberry aniga oo isticmaalaya strawberries fuuq dhadhan oo runtii waxaan jecelahay dhamaadka in ay siisay keegga strawberry. Waxaan ka fikiray waxa ugu wanaagsan ee tan lagu dhamayn karo marka loo eego dhibic casaan quruxsan. Marnaba dhib malahan midab keliya. Si aan u helo midab casaan dabiici ah oo casaan ah, waxaan u adeegsaday midabyo chameleon casaan ah oo ka yimid lahjadaha farshaxanka oo leh taabasho huruud ah. Miyuusan ku xusuusinaynin inaad dhalaasho jalaatada jalaatada? Yum!
Sida loo sameeyo ganache shukulaato cad ah
Qaabka dhaqameed ee loo sameeyo ganache waa in la kululeeyo kareemka ilaa uu ka soo baxayo ka dibna ku shub shukulaatada oo u daa ilaa 5 daqiiqo. Kareemka ayaa jilciya shukulaatada taas oo aad markaa liqi karto oo aad isku dari karto si aad uga dhigto ganache. Tani runti sifiican ayey ugu shaqeysaa caanaha ama shukulaatada madow laakiin sidoo kale sifiican ugama la ganache shukulaatada cad. Sababta ayaa ah in shukulaatada cad aysan dhab ahaan shukulaatada ahayn. Kaliya waa kareem, sonkor, subagga kookaha iyo vanilj mararka qaarkoodna maaddooyin kale oo u shaqeeya sidii xasiliyayaal.
Marka haddii aad halka aad u isticmaali lahayd isla saamiga kareemka / shukulaatada cad markaa ganache-kaaga weligiis ma dejin lahaa oo wuxuu noqon lahaa mid aad u maraq badan. Dadka qaarkiis waxay dhahaan saamiga 4: 1 (afar jibbaar ka badan sida shukulaatada cad) wuu shaqeeyaa laakiin waxaan doorbidayaa xitaa dareere ka yar faleebo.
Si aad uga dhigto ganache-kaaga shukulaatada cad waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad cabirto 6 oz oo shukulaato cad ah (waxaan door bidaa canjeero shukulaato cad cad oo Guittard laakiin nacnaca nacnaca wilton sidoo kale si fiican ayuu u shaqeyn doonaa. Ka fogow isticmaalka shukulaatada cad cad maxaa yeelay si fiican uma dhalaalaan) iyo 1.5 oz oo kareem culus oo karbaash ah.
Ku dhalaasho shukulaatadaada cad cad baaquli galaas ama kuleyliyaha kuleylka ah ama microwave-ka ilaa aad ka jilciso. Aniga ahaan waxay ii ahayd ilaa hal daqiiqo.
Ku dar kareemkaaga culus (qolka kuleylka ama kuleylka microwave-ka) isku walaaq oo isku dar oo shukulaatada oo dhami waa dhalaashay
Waqtigan xaadirka ah waad midabeyn kartaa ganache
Sug ilaa ganacheyahaagu ay qaboojinayaan illaa iyo heerka 95 ka hor intaadan isku deyin inaad ku dul tuubto keegaaga qaboojiyey ama ay dhibcoyaashu aad uga hooseeyaan keegaaga.
Sideed u sameysataa ganache shukulaato cadcad oo keeg ah?
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay isticmaalaan qaaddo si ay ganacsiyada ugu dul dhigaan keega laakiin waxaan arkaa inaan xakameyn badan leeyahay haddii aan isticmaalo bacda dhuumaha ama dhalo. Xitaa waad isticmaali kartaa bac balaastik ah oo caarada ka go'an hadaad runti u baahneyd. Furaha samaynta faleebada ganache ayaa u muuqata mid aad u fiican in lagu beddelo dhibco waaweyn oo wata dhibco yar. Tani waxay ka dhigeysaa qaab runtii aad u qurux badan waxayna umuuqataa mid dabiici ah.
Markaad hesho dhibco dhan keegga, waxaad ku buuxin kartaa bartamaha ganache badan ka dibna waxaad ku miisaami kartaa spatula, adigoo dhammaystiraya muuqaalka dhibic la'aanta ah.
sida loo dhalaaliyo shukulaatada sameynta
Cunto fudud oo fudud oo ganache ah oo isticmaalaya biyo
Habka loogu sameeyo ganache biyo lagu beddelo kareemku asal ahaan waa isku mid. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah inaad rabto inaad isticmaasho biyo waxyar ka yar kiriimyada. Cuntaddayda, waxaan u isticmaalaa 6oz oo ah canjeero shukulaato cad cad iyo 1 oz oo biyo diirran ka dibna walaaq ilaa la isku daro. Weli waxaan u oggolaanayaa inay qabowdo illaa 90 digrii ka hor tuubooyinka. Tani farsamo ahaan waa saamiga 6: 1 marka marka ay dejiso, waa mid aad u adag.
Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa saamigaan inaad ku sameysatid ganache shukulaato cad cad banaanka keega.
Ganacsadahaaga biyaha ayaad ugu midabeyn kartaa isla qaabkii aan ugu midabeynnay ganache lagu sameeyay kareem. Ganache ku keydi qaboojiyaha illaa toddobaad ama barafee illaa sannad. Keegga ay ganache dusha ka saaran yihiin uma baahna in la qaboojiyo.
Sida loo sameeyo ganache biyo-caano-la'aan ah
Shukulaatada cad (xitaa dhalaalka) waxay ka kooban yihiin caano. Haddii aad rabto in ganache-gaagu noqdo 100% caano-la'aan ka dib markaa waxaad u baahan lahayd inaad isticmaasho Shukulaatada cad ee aan caanaha lahayn .
Waxaad ka daawan kartaa casharradan fiidiyowga ah ee ku saabsan sida loo sameeyo noocyada kala duwan ee ganache ee loogu talagalay keegagga faleebada ah oo ay ka mid yihiin sida loo rinjiyeeyo dahabka faleebada ah.
Sida loo sameeyo ganac ganac biyo iyadoo la isticmaalayo biyo halkii kareem. Si fudud loo sameeyo oo dhadhan fiican! Waxaa loo isticmaali karaa sameynta keega dhibcaha ah ama u daa inuu ku qaboojiyo isugeynta subagga lowska iyo barafka keega. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado waqtiga qaboojinta:shan iyo toban daqiiqado Wadarta Waqtiga:10 daqiiqado Kalori:130kcal
Chocolate Chocolate Water Ganache
▢6 oz (170 g) shukulaatada cad Waxaan doorbidaa canjeero shukulaato cadcad oo guittard ah
▢1 oz (28 g) biyo diirran
Shukulaatada Madow Biyaha Ganache
▢6 oz (170 g) shukulaato Waxaan isticmaalaa shukulaatada guittard semi-sweet
▢1.5 oz (43 g) biyo diirran
Ku dhalaasho shukulaatadaada cad maddiibada galaaska ah kuleeliyaha laba jibbaaran ama microwave-ka. Ha kululayn
Ku walaaq biyahaaga illaa aad isku dardarayso oo aad simbiriirixan tahay. Ku dar midabaynta sida aad rabto.
U ogolow qaboojiyaha illaa 90 digrii ka hor inta aanad tuyin keegga ama haddii aad isticmaaleyso si aad u baraf dhigto keegaaga, u sii daa dhumuc ahaanta subagga looska ka hor intaadan isticmaalin.
Kalori:130kcal(7%)|Kaarboohaydraytyada:14g(5%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:7g(kow iyo toban%)|Dufan Dufan:4g(labaatan%)|Kalastarol:5mg(laba%)|Sodium:kow iyo labaatanmg(1%)|Kaliumperyamper:69mg(laba%)|Sonkor:14g(16%)|Vitamin A:5IU|Vitamin C:0.1mg|Kaalshiyam:48mg(5%)|Bir:0.1mg(1%)
Aasaaska Qurxinta Keega: Qalabka Qurxinta Keega
Talooyinka Qurxinta Cake
Cookie-ga Guriga Asalka ah (Cunnooyinka Nuqulka)
sida loo sameeyo keega daboolida jacelka
waa maxay waxyaabaha ku jira beenta ciridka
habka ugu fiican ee loo karinayo keega cad laga soo bilaabo xoq
xagee ka iibsan karaa shukulaatada tusaalaha ah
Qabooji karinta keega miraha la kariyey
Keega Strawberry ee ka soo baxa xoqidda lagu sameeyo qaboojiyaha strawberries ayaa sameeya keeg ka buuxa dhadhan iyo jajab jilicsan oo ku habboon isugeynta ama xardho
Waxyaabaha ay ka kooban yihiin heerkulka qolka Hacks
Maaddooyinka heerkulka qolka ayaa isbeddel weyn ku sameeya cuntadaada. Baro sida aan u kululeeyo maaddooyinkayga qabow min ukunta ilaa farmaajada, si dhakhso leh oo fudud.
Sida loo sameeyo sanduuqa jilicsan ee jilicsan ee la isku daray si ay u noqoto mid qoyan, dhadhan fiican leh oo dhadhamiya ku dhowaad sida ugu fiican ee guriga lagu sameeyo! Wanaagsan kuwa rootiga bilowga ah.